Chizvarwa chechipiri Apple TV inova "yechinyakare" | IPhone nhau
Chechipiri-chizvarwa Apple TV inova 'isingachashandi'
Sezvo iwe uchinyatso ziva, Apple ine iri voracious chishandiso kuvandudza uye chiyero mutemo. Nekudaro, isu tiri zvakare kutarisana neimwe yekambani inogadzira zvigadzirwa zvemagetsi zvevatengi nehurefu hwakareba hwehupenyu hwatinogona kuwana pamusika. Zvisinei, nhasi tine "Nhau dzakaipa" dzechipiri-chizvarwa chevashandisi veApple TV, ndechekuti Apple yasvika pakuona mudziyo uyu seusingachashandi, saka hazviite kuita chero mhando yekugadzirisa mune yepamutemo technical technical yekambani yeCupertino.
Chekutanga pane zvese, izvi zvinoreva kuti isu ticharega kugashira chero mhando ye software yekuvandudza yechipiri chizvarwa Apple TV. Ichi chishandiso chakatangwa munaGunyana 2010 uye chakatengeswa chaizvo kusvika gore ra2012, iro gore rakabatana nekuvhurwa kwechizvarwa chechitatu Apple TV, chishandiso chaive pakukwirira kwezvakange zvichitepfenyurwa panguva iyoyo (uye panguva iyoyo ikozvino), kubvira iyo yakapa 1080p resolution, ichiperekedzwa nekambani processor A5.
Ichokwadi kuti chizvarwa chechina Apple TV inopawo zvemukati mu FullHD resolution, asi isu takatarisana nemidziyo yakasiyana zvachose, yechina chizvarwa Apple TV ndicho chinhu chepedyo kune chishandiso cheIOS chatinogona kuwana mumusika wemultimedia wepakati.
Muchidimbu, patova nemakore mashanu mudziyo uyu watengeswa, uye makore manomwe kubva payakatangwa, saka Apple yakafunga kuiwedzera kune yayo hombe runyorwa rwezvishandiso zvashandura. Pamwe izvi Push iyo vamwe vashandisi vangangoda kuwana yechina chizvarwa Apple TV, Kunyangwe ari akasiyana akasiyana zvishandiso, zvakaoma kutenda kuti chero munhu ane kana nekadiki vavariro yekumutsiridza, haana kuzviita kare.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Chechipiri-chizvarwa Apple TV inova 'isingachashandi'
Google Sangana ndiyo nyowani nyowani kune Skype uye Amazon Chime
Vaongorori veBTIG vanofanotaura kukura kwakasimba kweApple pakati pa2017 na2018